Dr. Cali Ciise oo Calanka Puntland Caynaankiisa hanan doono | ToggaHerer
← Waa Kuma Maareeyaha Cusub ee Madbacadda Qaranku. Qalinkii Abdirashid Mohamed Jama “Belel”
Ilhaan Cumar oo loo dhaariyay xubin-nimada Kongareeska Maraykanka →
· Waa khabiir dhaqaalayahana, xushmada iyo qadarin weyne ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed dhamaanteed
· Waa nin sumcad fiican ku leh wadamada caalamka gaar ahaan wadamada dariska oo ay ku xiran tahay siyaasada gobolku.
· Guux la isla dhex marayo oo ah in la muujiyo in Puntland la wada leeyahay oo siinaysa fursad uu ku soo baxo.
· Xidlhibaanda beeshiisa oo leh cododka lagu kala adkaado Puntland
· Waqtiga kooban oo uu socodo Ololihiisa oo fursad u siinaysa inuu abaaro Xildhibaanda Cuusb. Halka musharixiinta kale ku daaleen socdaalo ay ku kala bixinayeen gobolada dalka.
· Soo celinta xariirkii la lahaa dowladda dhexe. In lala shaqeeyo dowladda dhexe waxaa ku jirta danta iyo horumarka Puntland.